अटो चलाएरै स्वदेशमै मनग्ये कमाई ::
अटो चलाएरै स्वदेशमै मनग्ये कमाई
अर्काको देशमा किन गुलामी गर्ने ? कसैको करकापमा बस्नु नपरेकोमो खुसी
सिन्धुली,२० माघ – कमलामाई नगरपालिका–४ निवासी विनोद राना मगरले अटो किनेर सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीमा चलाउन सुरु गर्नु भएको छ । अटोबाट दैनिक हुने आम्दानीले उहाँलाई माम र दाम दुवै राम्रो दिएको छ । “कुदन सके सबै खर्च कटाएर दिनको १५ सयदेखि १८ सय रुपैया बस्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पाँच लाख रुपैयाँमा किस्ताबन्दीमा अटो किनेका कमाएर घरपरिवार पाल्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “बिहानै रिक्सा लिएर निस्किन्छु, दिनको १५ देखि १८ सय कमाइ भइहाल्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “घर बसेर कमाउन पाउँदा खुसी लागेको छ ।”
तिनपाटन गाँउपालिका–२ भिमस्थानका २२ वर्षिय विमल मगर पनि अटोबाट मनग्य आम्दानी भएपछि दंग छन् पर्नु भएको छ । बसपार्क चोकमा यात्रु पर्खेर बसेका उहाँले भन्नुभयो, “महिनाको धेरै नभएपनि १५ हजार त मज्जाले कमाइन्छ ।”
सिन्धुलीको पुष्प कार्कीले कतारमा ८ वर्ष प्लबि«को काम गर्नुभयो । अर्काको देशमा रातदिन पसिना बगाए पनि आत्मसम्मान नपाएपछि नेपाल फर्किए अटो चलाउन सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
अटो किनेर गाउँमै स्वरोजगारी बन्नु भएका पुष्पले भन्नुभयो, “अर्काको देशमा किन गुलामी गर्ने ? अटो किनियो, राम्रो आम्दानी लिइरहेको छु । स्वरोजगार भएपछि कसैको करकापमा बस्नु नपरेकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । छिटो छरितो यात्राको लागि सवैले अटो नै खोज्छन ।” कार्कीले वर्दिवास, लालबन्दि, जनकपुर र सदरमुकाम आसपासका ठाँउमा यात्रुलाइ पुर्‍याउने गर्नुहुन्छ ।”
अर्का महिला सरिता सुनुवारको दिनचर्या पनि अटो चलाएर नै बित्ने गरेको छ । उहाँले पाँच लाख रुपैयामा अटो किन्नु भएको हो । पहिला घरधन्दामा व्यस्त हुने उहाँ अहिले अटो चलाएर मासिक २५ देखि ३० हजारसम्म कमाउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “मनग्य आम्दानी गरेकी छु । पहिला श्रीमानको आशमा बस्नु पथ्र्यो, तर अहिले कसैको आश गर्नु परेको छैन । आफनो लागि आफै केही गरौ भन्ने उदेश्य हो ।”
“पहिलाको अवस्था भन्दा अहिले पारिवारीक अवस्था पनि सुध्रिदै गएको र जिविकोपार्जनको लागि अटो नै रोजे की हुँ” उहाँले भन्नुभयो, “अटो चलाउन थालि सकेपछि अरुको आश गर्न छोडेको र कसैको दबाबमा बस्नु परेको छैन । दुई वटा छोरीलाइ पनि अहिले म आफैले कमाएर नै पढाएको छु ।”
सदरमुकाममा रातमाटा, ढुंग्रेवास, चियावारी, हिरापानी, माझीटार, मिलनचोक, साङवाले, खट्टार, मधुटार, रानीखोला, गडौली, पानीट्यांकी, माइस्थान, भिमान, महिला चालकहरुको दैनिकी रुट हो । सबै अटो चालकहरुको औसत मासिक कमाइ २० हजार भन्दा बढि नै छ । सुरु–सुरुमा टेम्पो कम हुदा मासिक एक लाख रुपैयासम्म कमाएको उनीहरुलाइ ताजै अनुभव छ ।
अहिले प्रतिस्पर्धा भएर आम्दानी घटेको महिला टेम्पु चालकहरु बताउछन् । पहिला एक सय रुपैया आउने ठाँउमा यतिखेर प्रतिस्पर्धाले गर्दा २० रुपैंयामा नै यात्रुलाइ गन्तव्यमा लगि दिनाले आम्दानी कम भएको उनीहरुको ठम्याई छ । महिला टेम्फु चालकहरु पनि आफ्नो पेशामा सन्तुष्ट देखिन्छन् । घरको काम गरेर पनि पेशा सम्हाल्न पाउदा उनीहरुलाइ आनन्द लागेको छ । सदरमुकाम सिन्धुलीमाढी बाहेक सडक भएको जुनसुकै स्थानमा पनि उनीहरु रिजर्भमा जाने गरेका छन् । सदरमुकाममा मात्रै यतिखेर तीन सयभन्दा बढी अटो रहेका छन् ।